साईप्रसमा थप एक जनाको मृत्यु ३५ कोरोना भाईरसका बिरामी फेला | Cyprus-Nepal.com
दिनेश गौतम ,
युरोप साईप्रस २९ मार्च २०२० । कोराना भाईरसको कारणले आज आईतवार थप एक जनाको मृत्य भएको छ भने ३५ जना मानिसहरुमा थप नया कोरोना भाईरस फेला परेको छ । यो सगै साईप्रस देशमा कोरोनाबाट मर्नेहरुको सख्या ६ जना र जम्मा कोरोना भाईरसका संक्रमीत बिरामीहरुको सख्यां २१४ भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संक्रमित बिरामहिरुमा ५ जना बेलायती नागरिक रहेको डा. लुईजो मारियोस्ले बताएका छन । उहाका अनुसार ३१ जना बिरामीहरुलाई मानिसहरुको सम्पर्कबाट , २ जना युरोपियन देशबाट फर्केका हुन भने २ जनालाई अनुसान्धानका क्रममा भेटिएको बताए । आज मृत्यु भएका बृद्धाका ४७ बर्षिय छोराको गत हप्ता मृत्यु भएको डा. लाकीस् प्लाजिज्ले जानकारी दिएको साइृप्रसका विभिन्न संचार माध्यमहरुले समाचार छापेका छन ।
त्यस्तै आईतवार स्वास्थ्य मन्त्रि कोस्तान्तीनोस् आन्नोउले यो सख्यां अहिले सम्मकै उच्च रहेकोले कोही पनि बिना काम घर भन्दा बाहिर नजानका लागि अनुरोध गरेका छन । उहाका अनुसार केही बिरामीहरु साथीहरुको सगंत र भेटघाट गरेर कोरोना सरेको बताउदै साइृप्रसको नियमलाइृ पालना गरिदिन सबै जनताहरुलाई आग्रह गरेका छन ।